Dhageyso Faahfaahin Laga Helayo Weerar Ka Dhacay Duleedka Beledweyne. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Faahfaahin Laga Helayo Weerar Ka Dhacay Duleedka Beledweyne.
Wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ee Bartamaha dalka Somalia waxey sheegayaan in duleedka magaalada uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada.
Dagaalkan waxa uu sigaar ah kaga dhacay agaagarka deegaanka Gambar-laawe oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka Beledweyne waxeyna wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in dagaalkaasi lagu jabiyay maleeshiyaatka dowlada.
Inta la xaqiijiyay dagaalkaasi ka dhacay duleedka Beledweyne waxaa lagu dilay Labo askari kaasi oo maleeshiyaatka dowlada kaga carareen goobtii lagu dagaalamay,sidoo kale askarta Murtadiinta waxey Beledweyne la galeen ugu yaraan Shan askari oo looga dhaawacay dagaalkaasi.
Halkan Ka Dhageyso Xogta Weerarkaasi.